စက်တင်ဘာထာဝရ: “မည်သူမှ မခွဲရပဲ နအဖ ကိုယ်တိုင်ဖြိုခွဲနေသော တပ်မတော်”
“မည်သူမှ မခွဲရပဲ နအဖ ကိုယ်တိုင်ဖြိုခွဲနေသော တပ်မတော်”
ဆောင်းပါးရှင် - ဝေဟင် ( ပြည်တွင်းမှ တပ်မတော် လေ အရာရှိတစ်ဦး)
စည်းလုံးခြင်းရဲ့ အင်အား site ကို တပ်တွင်း အခြေအနေများ ပိုမိုဖော်ပြလာမှု ကြောင့် စောင့်ကြည့်သူ များလာသလို တပ်မှူးများ၏ အာရုံစိုက်မှုလည်း ပိုမိုလာခဲ့ပါသည်။ Internet သုံးစွဲခွင့်ရှိသော တပ်ဖွဲ့များတွင် www.Photayokeking. org အား Server မှ ပိတ်ဆို့ထားကာ LAN အတွင်း ကြည့်မရအောင် လုပ်ဆောင်နေကြရာမှ site အား တိုက်ခိုက်သည်အထိ အနာပေါ်တုတ်ကျကာ တုန့်ပြန်လာခဲ့ပါသည်။ ဤသည်မှာ မတရားမှုကို လက်မခံသော၊ အမှန်တရားကို ရဲဝံ့စွာ ဖေါ်ထုတ်လာသော အမှန်တရား ဘက်သို့ ဆက်လက် ကူးပြောင်းရန် အရိပ်အယောင်ပြလာသော တပ်တွင်းမှ အင်အားစုများ ပေါ်ထွက်လာမှုအပေါ် စိုးရွံ့မှုကို သိသာစေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့ ပိတ်ဆို့ တားဆီးထားစေကာမူ ဘန်းကျော်အရပ်တွင် နှစ်များစွာ နေထိုင်ရင်း၊ ပိတ်ဆို့မှုကို တွန်းလှန်ရန် ကျင့်သားရနေသော အမှန်တရားကို မြတ်နိုးသူများစွာသည် နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် ဆက်လက် ဖတ်ရှုနေသကဲ့သို့ နအဖ ခေါင်းဆောင်များ အပါအ၀င် တပ်မှူးများစွာသည်လည်း ဖိုးတရုတ်မှ ဆောင်းပါးများကို Download လုပ်ကာ Print ထုတ်စေလျက် စောင့်ကြည့်နေသည်ကို ညီနောင်ရေးဖော်များသို့ အသိပေးလိုပါသည်။
ထို့ကြောင့်လည်း “ဘယ်သူခွဲခွဲ ဒို့မကွဲ၊ အမြဲစည်းလုံးမည်” ဟု ကြွေးကြော်ဝါဒဖြန့် နေစေကာမူ အောက်ခြေတပ်ဖွဲ့များ၌ အရာရှိများ အတွင်းတွင်ပင် မည်သည့် အကြောင်း အချက်များကြောင့် စိတ်ဝမ်းကွဲ နေကြသည်ကို နအဖ ခေါင်းဆောင်များနှင့် နှောင်ကြိုးကို မမြင်ပဲ ရပိုင်ခွင့်များဖြင့် သာယာနေကြသော ညီနောင်တစ်စုတို့ သိရှိစေရန် တင်ပြပေး ပါမည်။
“နောင်တခေတ်၏ အောင်စစ်သည်” ဟု ကြွေးကြော်ခဲ့သည်ဖြစ်စေ၊ “အနာဂတ်၏ စစ်ခေါင်းဆောင်” ဟု မျှော်လင့်ခဲ့သည်ဖြစ်စေ တပ်မတော်တွင် အရာရှိများအတွက် အဆင့် တိုးမြှင့်ရေး လစာစရိတ်နှင့် ခံစား ခွင့်များသည် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း မူဝါဒ တသမတ်တည်း သာ ရှိသင့်ပါသည်။ တခုတည်းသော တပ်မတော်ဟု ကြွေးကြော်ကာ ကြည်း/ရေ/လေ တပ်ဖွဲ့အားလုံး တန်းတူဖြစ်ရမည်ဟု ဆိုသော်လည်း လက်ရှိ အနေအထားကို တပ်တွင်းမှ ညီနောင်များ အသိဖြစ်ပါသည်။
ယခင်က တပ်ဖွဲ့များ၏ သဘော သဘာဝအရ ရေ/လေ အပါအ၀င် လက်ရုံးတပ်ဖွဲ့များ၏ သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးချုပ်ရုံးနှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးများက တိုက်ရိုက်ကွပ်ကဲမှုဖြင့် သွက်လက် မြန်ဆန်စွာ ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ တိုင်း/တပ်မ မှ စကာ ကကကြည်း ကိုပါ အစီရင်ခံနေရခြင်းက သက်သေခံနေပါသည်။ ဤသည်မှာ တပ်ဖွဲ့များအပေါ် မယုံ ကြည်ပဲ လွှမ်းမိုးချယ်လှယ်လိုသော နအဖ ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များ၏ သဘောထားအဖြစ် အရာရှိများက သတ်မှတ် ကြပါသည်။
မည်သို့သော ခံယူချက်ဖြင့် တပ်တွင်းသို့ ရောက်လာသည်ဖြစ်စေ၊ လူသားများဖြစ် သော အရာရှိများ၏ ယေဘူယျု မျှော်မှန်းချက်မှာ တချိန်တွင် မိမိ၏ အရည်အချင်းအလိုက် တပ်မှူး၊ တိုင်းမှူးမှသည် ဦးစီးချုပ်အထိ မျှော်မှန်းကြသည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ “မလုပ်၊မရှုပ်၊ မပြုတ်” ဟု ခံယူကာ ကျည်လွတ်မြေတွင် ခိုလှုံရင်း “အနေကြာရင် မေဂျာတော့ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဆိုသူများရှိသလို၊ “ထားရာနေ၊ စေရာသွား” တဇွတ်ထိုး တိုက်ချင်သူများ “အပေါ်ဖား အောက်ဖိ” လည်သလို စားနေသူများလည်း ရှိပေသည်။
လက်ရှိ လူနေမှုစနစ်အရ တပ်တွင်း မိသားစုများသည်လည်း ပြည်သူများနည်းတူ အဆင်မပြေမှုများစွာကို ခံစားနေရသည်ဖြစ်ရာ အများ မိုးခါးရေသောက်နေချိန်တွင် အမှီလိုက်နိုင်ရန် အရာရှိများသည်လည်း မိမိ၏ မိသားစုအဆင်ပြေစေရေး အတွက် ရာထူး အမြန်တိုးကာ ထိပ်ပိုင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိရေး စိတ်ကူးအိပ်မက်များ မက်နေကြရပါသည်။ ထို ဆန္ဒများနှင့် လက်တွေ့နယ်ပယ်မှ မညီမျှမှုများ ထိပ်တိုက်တွေ့သောအခါ တပ်မတော်သည် မည်သူမှ ခွဲရန် မလိုပဲ အလိုလို ကွဲရန်သာ ရှိပါတော့သည်။
ယခင်က အရာရှိ အဆင့်တိုးမြှင့်ရေးအတွက် စိတ်ဝင်စားမှုများသည် ယနေ့ကာလ လောက် မပြင်းထန်ခဲ့ပါ။ ပြန်တမ်းဝင်နှစ်အလိုက် ပုံမှန်ထိုင်ပြီး မူနှင့်ညီသော အရာရှိများ အတွက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာပင် မလိုခဲ့ပါ။ ယခုမူ တစ်နှစ်တွင် တစ်ကြိမ်ထိုင်ဖို့ပင် မသေချာသလို ဘယ်အချိန်က သတ်မှတ်လိုက်သည် မသိလိုက်ရသော မူများကြောင့် လည်း ဘာမှန်းမသိရပဲ မိမိက အဆင့်တိုးမပါတော့ပဲ တစ်သက်လုံး ဗိုလ်ကြီးဘ၀ ဗိုလ်မှူးဘ၀ ဒုဗိုလ်မှူးကြီးဘ၀မှာ နေနေရသော အရာရှိများလည်း ရှိလာရာ အပတ်စဉ် သောကြာ နေ့တိုင်း မျှော်တလင့်လင့် ဖြစ်နေရသော အရာရှိငယ်များ၏ ဘ၀ကို ဗိုလ်ချုပ် ကြီးများ သိစေချင်ပါသည်။
စည်းကမ်းတကျ့ လက်အောက် ငယ်သားများအပေါ် တပ်မှူးကောင်း စိတ်ဓါတ်နှင့် မိဘသဖွယ် စိတ်ထားသာရှိပါမူ ဤဖြစ်စဉ်များ ပေါ်ထွက်လာစရာအကြောင်း မရှိပါချေ။ မှတ်တမ်းများအရ ပြန်တမ်းဝင်နှစ် အလိုက် တိုးမြှင့်ရရှိရမည့် အဆင့်အလိုက် မရရှိသေးသူ များသည် မည်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်၊ မည်သည့်မူနှင့် ငြိစွန်းသည် (သို့မဟုတ်) ထိုက်တန်ပါလျက် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ကျန်ခဲ့သည် စသည်ဖြင့် ပြန်လည် စိစစ်မူ မျိုးကို လုပ်ရုံမျှဖြင့် နစ်နာသူများကို ဖြေသိမ့်စေနိုင်ပါမည်။
သို့သော်လည်း နိုင်ငံတော် အာဏာကိုသာ ယစ်မူးနေပြီး “အဆင့်ဆင့် သတင်းပို့ပါ” ဟု စာတမ်းကပ်ရုံကပ်ထားသော တပ်မှူးများ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများသည် ဤဖြစ်စဉ်များအရ အပတ်စဉ် များစွာ ကွာခြားသော Junior က တပ်မှူး ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ဖြစ်လာသည့်အတွက် မည်သို့မျှ သည်းမခံနိုင်သော Senior ဗိုလ်ကြီးတစ်ဦး၏ နှုတ်ထွက်စာကို မသိကျိုးကျွံပြုကာ မျက်နှာလွှဲ နေရက် ကြပေသည်။
မိမိပြုမိသော အပြစ်ရှိထား၍ ထိုအပြစ်ကြောင့် အကျိုးသက်ရောက်သည်ဆိုလျှင် ဖြေသိမ့်နိုင်သော်လည်း ဤပညာအရည်အချင်းဖြင့်ပင် သင့်တော်သည်ဟု ဆိုကာ တာဝန် ပေး ခေါ်ယူခဲ့ပြီး ပြစ်မှုကင်းရှင်းရုံမျှမက ထူးချွန်စွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါလျက် ယနေ့ အချိန်ကျမှ ပညာအရည်အချင်းနှင့် မူအရ အဆင့်တိုးပေးရန် မဖြစ်နိုင်တော့ပါဟု တန်းဖြုတ် ခံရကာ ၊ ဗိုလ်သင်တန်း တပတ်စဉ်တည်း ဆင်းလာသည့် BE အင်ဂျင်နီယာ ဘွဲ့ရ ဒု ဗိုလ်မှူးကြီးက တပ်မှူး BSC ဘွဲ့ရ ၎င်းအရာရှိက တပ်ရေးဗိုလ်ကြီးအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေ ရသော လေတပ်မှ ခွက်ပျောက် စစ်ဗိုလ်တစ်ဦးကို ဥပမာပေးလိုပါသည်။
ထိုသို့သော အရာရှိတစ်ဦး၏ ရင်တွင်းမှ ခံစားချက်ကို ပုံဖော်ကြည့်မည်ဆိုလျှင်…. သူ၏နေ့စဉ် တာဝန်ချိန်ကို မည်သို့ဖြတ်သန်းပါမည်နည်း၊ သူ့အပေါ် လက်အောက်မှ စစ်သည်များကရော မည်သို့ ဆက်ဆံကြပါမည်နည်း၊ မိမိ၏ အားနည်းချက်ကြောင့် မဟုတ်ပဲ ဤအဆင့်တွင်ပင်နေရကာ တန်းတူရော Junior များကိုပါ အရိုအသေ ပေးနေရသော နေ့စဉ်ဘ၀ကို ရေရှည် ခံစားနိုင်ပါမည်လား၊ မိသားစုနှင့် အပေါင်း အသင်းများ အလယ်တွင်ရော မိမိ၏ တပ်မတော်သားဘ၀ကို နားလည်စာနာရန် မည်သို့ ဖြေရှင်းပါမည်လဲ…. စသော အခြေအနေ များစွာမှသည် နာကျည်းခံပြင်းမှုများ ဖြစ်တည် လာပါတော့သည်။
၎င်းဗိုလ်ကြီးကဲ့သို့ပင် အခြားသော ဗိုလ်ကြီးများ၊ ဗိုလ်မှူးများ၊ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး များသည် တပ်တွင်းတွင် များစွာ ရှိနေပါသည်။ အဆင့်အလိုက် ခံစားချက် ကွာခြားမည် ဖြစ် သော်လည်း သူတို့သည် တပ်မတော်နှင့် စစ်သည်များ၏ လက်ရှိအခြေအနေကို အခွင့် အရေးခံစား နေသူများထက် ပိုမိုရှင်းလင်းစွာ သိမြင်သူများ ဖြစ်လာပါသည်။ ပြန်တမ်း ၀င်နှစ်အရ မိမိ၏ အပတ်စဉ်တူများ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ဖြစ်နေသည့်တိုင် ဗိုလ်ကြီး အဆင့်ဖြင့် ကျန်နေသူများ ရှိသည်ဆိုခြင်းကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများက ချဲ့ကားသည်ဟု ဆိုချင်ပါလိမ့်မည်။
တပ်ဖွဲ့အားလုံးမှ ဗိုလ်ကြီး ဗိုလ်မှူး အဆင့်အားလုံးအား ပြန်တမ်းဝင်နှစ် အလိုက် စီစစ်လိုက်ပါက “ဝေဟင်” ၏ စကားကို လက်ခံရပါလိမ့်မည်။ ထိုသူများထဲတွင် ပြစ် မှုကင်းရှင်းပါလျက် တာဝန်ရှိသူများက ချန်လှပ်ထားခြင်း ခံနေရသူများ ပါနေသည်ကို ထပ်တွေ့ရပါသည်။ တန်းတူရည်တူ ခံစားခွင့် မရှိသည့် တပ်မတော်သည် အလိုလို ကွဲနေသလို တပ်တွင်းမကျေနပ်မှုများ မှုခင်းများသည်လည်း မည့်သည့်အခြေခံကြောင့် ဖြစ်နေရခြင်းကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ နားလည် သဘောပေါက်လာပါလိမ့်မည်။
ဤသို့ဆိုလျှင် ပြည်သူလူထုနှင့်တကွ တပ်အတွင်းတွင် ဒီမိုကရေစီ အမှန်တကယ် လိုအပ် နေကြောင်း တပ်မတော်သားများ အားလုံးအနေနှင့် နားလည် သဘောပေါက်နိုင် လောက်ပေပြီ။ ယနေ့ စစ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်း အနေဖြင့် တိုင်းပြည်ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် လုပ်ဖို့ မဆိုထားနှင့်၊ တပ်အတွင်းမှာပင် မိဘသဖွယ် ရင်ဝယ်သားလိုတနည်း ရဲဘော် ရဲဘက်စိတ်များ ထားရှိမှု လုံးဝ ( လုံးဝ) မရှိဘဲ မိမိတို့ စည်းစိမ်၊ ရာထူး၊ အာဏာ တည်မြဲရေး အတွက်သာ အပေါ်ဖါးအောက်ဖိရင်း ထင်သလို မူဝါဒများ ချမှတ် နေမှုကြောင့်
မကြာခင်မှာပင် တပ်နဲ့ ပြည်သူ ချစ်ကြည်ဖြူ သွေးခွဲလာသူ နအဖလူများအား တိုက်ထုတ်ဖို့
အဆင်သင့် ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျား။